कवाडीलाई शोधपत्र, डेंगु रोक्न सुरक्षाकर्मी ! -
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०२:२८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on कवाडीलाई शोधपत्र, डेंगु रोक्न सुरक्षाकर्मी !
लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोगको फैलावट र राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक आजका अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक वेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था, अनुसन्धानमूलक सामग्रीहरूको संरक्षण, नेपाल–चीनबीचको सैन्य अभ्यासलगायत विषयलाई पनि पनि पत्रपत्रिकाहरूले ‘कभरेज’ गरेका छन् ।
अन्नपूर्णले डेंगु नियन्त्रण नभएपछि सरकारले सेना, प्रहरीसहित सबै पक्षको सहयोग मागेको समाचार छापेको छ । यो रोग फैलाउने लामखुट्टे नष्ट गर्न सञ्चालित अभियान प्रभावकारी नदेखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो विकल्प रोजेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०६७ मा चितवनमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएको थियो ।
यस वर्ष धरानबाट देखापरेको डेंगु कर्णालीबाहेकका सबै प्रदेशमा फैलिएको छ । यसबाट संक्रमित कम्तीमा ३ को ज्यान गइसकेको छ भने १५०० भन्दा संक्रमित छन् ।
‘सच्चिँदै मिडिया काउन्सिल विधेयक’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्णले अर्को खबर पनि छापेको छ । समाचार अनुसार चौतर्फी दबावपछि सरकार लचिलो बनेको छ र केही प्रावधानहरू परिवर्तन गरिएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सडक र सदन तताउने भनेर लिएको निर्णय र नेपाल–चीनबीच जारी सैन्य अभ्यासलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकतापूर्वक आफ्नो पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
कान्तिपुरले ‘कहाँ छन् ३३०० ?’ शीर्षक दिएर द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्थाबारे राज्यसँग प्रश्न गरेको छ ।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ३३०० नागरिक बेपत्ता बनाइएका थिए । तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्थाबारे परिवारका सदस्यले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
कबाडीलाई शोधपत्र बिक्री गरिएकोसम्बन्धी खबरलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएर छापेको छ । स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्रमुख महेशकुमार खत्रीले पुस्तकालयमा रहेका मानविकी संकायअन्तर्गत १२ विषयका महत्त्वपूर्ण किताब र शोधपत्र कवाडी व्यवसायीलाई बेचिदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
दुई तिहाई बहुमतको आधारमा बनेको सरकारको दम्भका कारण नेपाली जनताहरूले दुःख पाए: निधि
सैनिक कल्याणकारी कोष : एक वर्षमै ३ अर्ब बढ्यो
१ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:१६ Tamakoshi Sandesh
नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह
१० भाद्र २०७६, मंगलवार ०१:२४ Tamakoshi Sandesh
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०१:४६ Tamakoshi Sandesh
बेनीको नगरप्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा माओवादी
सिदिङ्वाको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा गठबन्धन विजयी
चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी
कामपाको प्रमुखमा बालेन्द्र र उपप्रमुखमा डङ्गोलकै अग्रता कायम